ခန္ဓာကိုယ်ဟာရေကိုဘာကြောင့်လိုအပ်သလဲ? - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Health » ခန္ဓာကိုယ်ဟာရေကိုဘာကြောင့်လိုအပ်သလဲ?
Min Thuta | Health | September 26, 2018
ယခုလိုပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာရေများများသောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရေအသက်တစ်မနက်ဆိုတဲ့အတိုင်းသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရေမသောက်ပဲမရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့နဲ့ နေ့စဉ်တက်ကြွလန်း ဆန်းနေဖို့အတွက် ရေများများသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရေများများသောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့စကား ကိုတော့ကြားနေကျဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကရေကိုလိုအပ်တာလဲ ဘာကြောင့်ရေများ များ
ရေသန့်မှာပါဝင်တဲ့ကယ်လိုရီပမာဏဟာ Zero ပါ။ ဒါကြောင့်ရေဟာ အဆီနဲ့ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ် တွေ ပရိုတိန်းတွေမပါဝင်ပဲ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ်ပြည့်ဝစေဖို့ လိုသလောက်သောက်သုံးလို့ရပြီး ကိုယ်အလေးချိန်တိုးမှာလဲမစိုးရိမ်ရပါဘူး။
ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ်မလုံလောက်တာဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ ၂% သောရေပမာဏလောက်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုရင်ပဲ သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအားနည်းလာတာ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကမောက်ကမဖြစ်တာ ဝမ်းချုပ်တာ ခေါင်းကိုက်ခဲတာစတာတွေဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဦးနှောက်ရဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေလုပ်ဆောင်မှုတွေပါကျဆင်းစေပါတယ်။ရေများများသောက်ပေးခြင်းဖြင့်အဆိုပါပြသနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ရေမှာအာဟာရဓာတ်မပါဝင်ပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေ ဥပမာ- ဆိုဒီယမ်ဓာတ်၊ ကယ်လ်ဆီရန်ဓာတ်စတာတွေကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိပြီးသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
by Min Thuta on December 28, 2018 -0Comments
နေ့စဉ်ကျန်းမာရေးအတွက်ပုံမှန်စားသုံးပေးသင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုစေမဲ့အစားအစာတွေကတော့... ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်ဖြူဟာ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ရောဂါပိုးတွေကိုသေစေ...
by Min Thuta on January 10, 2019 -0Comments
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်း အစားလျော့ခြင်းတို့အပြင် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကို ဖော်ပြပေးပါ...
by Min Thuta on January 18, 2019 -0Comments
သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်း ဒါမှမဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းအားကျဆင်းနေတယ် ရောင်းအားတက်သင့်သလောက်မတက်ဘူးဆိုရင်တော့ ယခုဖော်ပြမဲ့အခြေခံအချက်တွေကို လိုက်နာဖို့လိုနေပါပြီ... ...
ယနေ့ခေတ်မှာ အသင့်စားအစားအစာတွေပေါများလာပြီး စားသုံးသူတွေအနေနှင့်လည်း အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီးဝယ်ရတာလွယ်ကူတာကြောင့် အသင့်စားအစားအစာတွေကို နှစ်ခြိုက်စွာစားသုံးန...
Apple iPhone XS Max 256GB Unlocked == $650 February 11, 2019
Whatsapp: +12052163602 iphone Xs MAS, samsung Note 9, Sony PlayStation4Pro 2TB January 28, 2019
WHATSAPP +12052163602 APPLE IPHONE XS MAX/xs/x,SONY PLAYSTATION4PRO 1TB January 25, 2019
Whatsapp: +12052163602 iphone Xs MAS, samsung Note 9, Sony PlayStation4Pro 2TB January 21, 2019
Microsoft Surface Pro6with Type Cover ( Intel core i5, 8GB / 128GB ) January 21, 2019
All times are GMT 6.5. The time now is 12:48 pm.